बागमतीमा देखिएला शिव श्रेष्ठ क्रेज ? « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
बागमतीमा देखिएला शिव श्रेष्ठ क्रेज ?
७ मंसिर २०७२, सोमबार ०५:४९
काठमाडौं । पौष २४ लाई रिलिज मिति तय गरेको फिल्म बागमती युनिट अहिले प्रचार प्रसारमा व्यस्त छ । निर्माण टिमको तर्फबाट आईतवार राजधानीमा आयोजित पत्रकारसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा फिल्मका कलाकारहरुले आफ्नो आफ्नो अनुभव सुनाए । प्रचारात्मक कार्यक्रममा पहिलोपटक देखिएकी नायिका केकी अधिकारीले बागमती फिल्मसँग नाम जोड्न पाउनु नै आफ्नो लागी ठुलो उपलब्धी भएको सुनाईन् ।
प्रकाशित : ७ मंसिर २०७२, सोमबार ०५:४९